Ning ကိုအစားထိုးမဲ့ wackwall.com - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Ning ကိုအစားထိုးမဲ့ wackwall.com
ကျွန်တော်တို့ Ning.com တွေ free မရတော့ လုပ်လစသူတွေလဲ..စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမဘဲ..ဒီအတွက် သတင်းကောင်းလေးတခုပါ.. ဒီဟာလေးကတော့
နည်းပါတယ်. Ning.com လောက်တော့မကောင်းပါဘူး.
Menu tab အနေနဲ့တော့ Index-My Profile-Members-Photos-video-Blogs-Link-Forum-Chat-Admin
ဆိုပြီးတော့ ရှိပါတယ်.ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မရှိမဖြစ်.. HTML လဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်.ဒီအပြင် Menu tab ကိုလဲ ပြုပြင်လို့ရတယ်.Template ကိုလဲပြင်လို့ရပါတယ်. blog မှာရှိတဲ့ Widget အတိုင်းဘဲ arrange လဲလုပ်လို့ရ... Html,Java Script စတဲ့ code တွေလဲရ...စုံလင်နေပါတယ်..ဒီအပြင် Free အစစ်လေးဖြစ်ပါတယ်...RSS လဲထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်.ဒါပေမယ့် ဘလော့ရေးရင်ပုံတင်လို့ မရပါဘူး .. အဲဒီအတွက် လင့်ဝယ်ချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊၊ ထိုအပြင် Ning.com မှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ import လုပ်ပေးတဲ့ option လဲရှိပါတယ်. မြန်မာလိုလဲ ဘာသာပြန်လို့ ရပါတယ် ၊၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ပြီးတော့ ကိုယ် Ning.com က သူငယ်ချင်းများကို လဲ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်....
ဒါလေးကိုလဲ ၀င်လေ့လာကြည့်ပါအုံး အတူတူနီးနီးပါပဲ...
၀န်ခံချက် ၊၊ ၊၊ (စံပီး) ထံမှာတွေ့ လို့ ကျွန်တော့် မှာရှိတာလေး နဲ့ ဖြည့်စွတ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြထားတာပါ..၊